Quruxda dimuqraadiyadda - Amjambo Africa
Qoragu Waa :Georges Budagu Makoko
Quruxda dimuqraadiyadu waxay tahay in nidaamka uu salka ku hayo awood la siiyay muwaadinka si uu u go’aansado qofka loo codeyn doono xafiiska. Qaar badan oo ka mid ah 7.8 bilyan oo qof oo adduunka ah ayaan lagu barakeynin mudnaanta doorashada hoggaamiyeyaashooda, laakiin muwaadiniinta Mareykanka ayaa ah, iyo taariikh taariikhi ah 161 milyan oo Mareykan ah ayaa u soo baxay inay codeeyaan intii lagu jiray doorashadii madaxtinimada ee 2020. Xaqiiqdii, 2020 waxay ahayd doorashadii ugu ilbaxnimada badnayd ee mtaariikhda casriga ah ee Mareykanka – tanina waa tiiyoo ay jirto aafada aan caadiga ahayn ee COVID-19 oo qaaday boqolaal kun oo qof oo qoysas ah. Xitaa inta lagu gudajiray dhibaatadan baahsan, malaayiin Mareykan ah ayaa hubiyay inay adeegsadeen awooda codkooda. Saaxiibadayda muhaajiriinta ahi waxay rumaysan yihiin in sababta dad badani u soo baxeen ay ahayd inay u dagaallamaan qiyamka dimoqraadiyadda. Dadka midabada leh waxay u codeeyeen tiro aad u tiro badan, waana ku faraxsanahay in codkeena mar dambe aan la iska indhatiri karin howlaha doorashada.
Xitaa dhalinyarada oo aan si caadi ah u codeyn ayaa u soo baxay.
Waxaan joogay Mareykanka 18-kii sano ee la soo dhaafay waxaan ka qeyb galay doorashooyin dhowr ah. Laakiin waligey ma soo marin xilli doorasho sida kan oo kale, oo aan guuleystaha aan lagu dhawaaqin Maalinta Doorashada, iyo heerka welwelka la dareemayo ee bulshada soogalootiga ah maalinba maalinta ka dambeysa sii kordheysa iyadoo ummaddu sugeyso natiijooyinka. Waan ogahay inaan taleefankayga iska haysto meel u dhow 24/7, oo aan tooso habeen kasta marar badan si aan u arko haddii natiijooyinka ugu dambeeya la dhejiyay.
Inta badan dadka aan ogahay waxay waqti badan la qaateen lahadlida asxaabtooda gudaha Mareykanka iyo dibada, dhamaanteen waxaan iskudayeynaa inaan saadaalin sax ah ka bixinno natiijada. Qofkasta oo aan ogahay wuxuu ahaa mid xiiraya diirada saara doorashooyinka. Afar sano oo duufaan ah oo ku hoos noolaa maamulka hada jira aad ayey ugu adkeyd bulshada soo galootiga ah.
Inbadan waxay ila wadaageen inay gebi ahaanba kalsoonidii kala noqdeen dalka, rajadoodii iyo himiladoodii mustaqbalna ay burbureen afartii sano ee lasoo dhaafay. Waxay ka hadleen saameynta ay siyaasadaha socdaalka ee Trump ku yeelatay bulshada soo galootiga ah ee halkan ku nool Maine, waxayna sheegeen in aaminsanaantooda qiimaha asaasiga ah ee Mareykanka ee soo dhaweynta soo galootiga ay si weyn u wiiqantay Waxay sheegeen in ay ka naxeen amarada joogtada ah ee fulinta ee lagu bartilmaameedsanayo soo galootiga, iyo in kumanaan beegsashada muhaajiriinta, iyo in kumanaan qof ay ka quusteen Mareykanka oo ay u guureen Kanada, si ay magangalyo uga helaan.
Xubnaha bulshada ayaa rumeysan in natiijada ka soo baxday doorashooyinka sanadkaan ay tahay mid war aad u wanaagsan u ah soo galootiga, waxayna rajeynayaan maalmo wanaagsan oo soo socda. Waxay ku qanacsan yihiin in aysan mar dambe ka kici doonin tweets laga yaabo inay u sheegaan inay xirxiraan oo ay ka baxaan waddankii ay u qaateen sidii gurigooda cusub, ee nabdoon. Dadku waxay ka hadleen doorashadii Joe Biden inay ahayd guul laga gaadhay cabsida. Gabar da ’yar oo aan la hadlay oo ka qeyb qaadatay seddex doorasho oo Mareykan ah tan iyo markii ay muwaadinimada qaadatay waxay tiri,“ Maamulkaan wuxuu ahaa mid culeys badan ku haya muhaajiriinta, iyo isbadalada joogtada ah ee ku saabsan soogalootiga ee inta badan la fuliyo ayaa nolosha muhaajiriinta aad u adag. Rajada aan ka qabo maamulka cusub ayaa ah inaan awoodi doono inaan ogaado waxa aan filan karo oo aanan ka nixin waqtiga oo dhan – afartii sano ee la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwo qiiro leh. Waxaan rajeynayaa in maamulka cusub ee Joe Biden uu naga caawin doono habka bogsashada. Rajada ayaa dib loogu soo celiyey dibedda iyo sidoo kale Maine.
Qaxooti reer Koongo ah oo ku nool Kenya wuxuu ii sheegay in “Hoggaanka Mareykanka ee adduunka oo dhan si xun u wiiqmay. Waxaan rajeyneynaa inaan aragno mar kale oo ay dib u soo noqoto. Inta badan soogalootiga ka yimaada Afrika waxay yaqaanaan qalalaasaha shacabka kadib doorashooyinka, qaasatan marka xisbi siyaasadeed diido Tusaalooyinkii ugu dambeeyay waa doorashadii 2015 ka dhacday Burundi; doorashadii 2017 ka dhacday Kenya; doorashadii 2018 ka dhacday DR Congo. Muhaajiriinta arka Jamhuuriyiinta oo banaanbaxyo ka dhigaya waddooyinka, iyo Madaxweyne Trump oo la tartamaya natiijada doorashada, ayaa ka baqaya in rabshadaha shacabka ay isu rogaan rabshado Dimuqraadiyadu waa mid aad u jilicsan waana in la ilaaliyaa – marka la waayo, waxay qaadataa sanado badan in dib loo helo, mararka qaarna weligeed waa la waayaa. Tusaale ahaan, 1930-kii doorashooyin dimoqraadi ah ayaa keenay xukunka Hitler, laakiin markaa waddaniyiin
xisbigii ayaa gacanta ku dhigay oo ajendahoodii ku soo rogay dalka oo dhan.
Baryadayda qumman waxay tahay in boqolaal sano oo dhisida hay’ado dimoqraadi ah oo xoog leh gudaha Mareykanka ay ka guuleysan doonaan damaca shaqsiga iyo danahooda gaarka ah. Ilaahay ha barakeeyo Ameerika dib ugu noqoshada qiimaheena asaasiga ah
Previouswaxwalba waxay leeyihiin bilaw iyo dhamaad.
NextRaiisel wasaare Abiy Ahmed ee Itoobiya wuxuu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah waqooyiga gobolka Tigray